Mogadishu Journal » Diyaaradii siday Madaxweynayaashii hore oo ka degtay Beledweyne
Mjournal :-Wararka aan ka heleyno magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in diyaaradii ay la socdeen Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif loo ogolaaday in ay kasoo degto magaalada Baladweyne.
Diyaarada oo saakay ka duushay magaalada Muqdisho ayaa markii ay ku dhawaatay garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne laga dansaday raadeelka, waxa ayna diyaarada ku sigatay in dib ugu soo laabato magaalada Muqdisho.
Sida aan wararka ku helnay diyaarada oo daqiiqado badan hawada Baladweyne hee haabeysay ayaa ugu dambeyn loo ogolaaday in ay kasoo degto garoonka kadib wadahadalo dhax maray wafdiga Shekh Shariif iyo maamulka Garoonka.
Garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne waxaa kusoo dhaweeyay wafdiga Madaxdii hore xubno katirsan maamulka Hirshabelle, waxaana wafdiga loo galbiyay magaalada Baladweyne ay u tageen in ay soo arkaan xaalada ka jirta sidoo kale deeq geeyaan.
Madasha Xisbiyada Qaran uu hogaamiyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaan wali si rasmi uga hadlin xanibaadii saakay garoonka Muqdisho lagula sameeyay in sidoo kale is hortaagii lagu sameeyay in ay ka degaan garoonka diyaaradaha Baladweyne.
Bangiga Ganacsiga Itoobiya oo xarun ka furanaya magaalo kutaala Soomaaliya